Manan-janaka ve i Lance Armstrong? - Armstrong
Tena > Armstrong > Fitsidihana Armstrong - fitadiavana vahaolana
Fitsidihana Armstrong - fitadiavana vahaolana
Manan-janaka ve i Lance Armstrong?
Tena adala tanteraka. Ireo fahafatesana ireo dia mitranga indrindra satria ny olona tsy mitandrina na tonga amin'ny toe-javatra mampidi-doza fotsiny. Salama ry zalahy, tongasoa indray ny fizarana iray amin'ny Stay Wise.
Lehilahy roa no nandeha tany Russia rehefa tonga izy ireo - grenady velona iray; ny grenady dia nesorina tsy nahy tamin'ity toe-javatra ity, izay midika fa mitam-piadiana ilay grenady ary mety hipoaka haingana be. Ny antony tsy nipoahany dia tsy fahombiazan'ny rafitra; Mbola tsy nilamina ihany anefa ny naka azy io.
Tsy fantatr'izy roa lahy izany; Nihevitra izy ireo fa mety izany hevitra izany raha haka grenady ary hanao selfie miaraka aminy. Raha ny marina dia nipoaka teo afovoan'ny sary ilay grenady, saingy ny mampihomehy, na dia maty aza ireo lehilahy ireo dia velona ihany ilay telefaona ary izany no nanaporofoana ny fahafatesan'ny lehilahy. Betsaka ny olona maka sary miaraka amin'ny basiny sy bala hafa fenoina, heverin'izy ireo fa tifitra mangatsiaka izany, saingy mety hamoy ny ainy izany.
Nomery 9 - Michael Godwin Novonoina ho faty izy aloha, saingy avy eo nisy fiovana tamin'ny fanamelohana azy ary voaheloka higadra mandra-pahafatiny, fanovana fahasambarana, na farafaharatsiny tokony ho izy. Nilamina ny fiainana tao an-tranony mandra-pahitany andro iray fa tsy mandeha ny fahitalavitra ananany. Nandinika izy ary hitany fa tariby maloto io; Rehefa avy nijery ny zava-nisy izy dia nahatsapa fa ny safidy tsara indrindra dia ny manapaka ny tariby amin'ny nifiny, ary amin'ny lafiny maro izay tsy dia marani-tsaina loatra.
Saingy ny fanamboarana nataony tamin'ny alàlan'ny trano fidiovana vy dia nanamafy ny herin'ny herinaratra namono azy. Nomery 8 - Ahoana no tsy hialana amin'ny famonoana olona? Tamin'ny 2002, ny tantsaha iray tany Brezila dia nandeha nankeny amin'ny tranony ary nahita tranon-tantely iray lehibe niandry azy. Mety hampidi-doza sy mety hahafaty ny tantely.
Nandritra io fivoriana marathon io dia tsy nihinan-kanina na natory izy ary ny fialantsasatra tokana nananany dia ny fandehanana tany amin'ny trano fidiovana ahitanao ny olana amin'izany dia fantatrao izay alehany. Satria rehefa nilalao ireo 50 ora ireo nefa tsy nikarakara ny vatany dia maty izy. Nilaza ny mpitsabo fa fifangaroan'ny tsy fahombiazan'ny fo sy ny faharerahana no nahatonga ny fahafatesany tampoka.
Isa 5 - Baomba jiro lavaava Misy fomba maro samihafa handravahana efitrano iray, fa ny jiro lava dia misy eraky ny olona tsirairay, fa rehefa raisinao sy hafanainao aloha dia misy lalàna mila arahana, indrindra miadana. Philip Quinn 24 taona nametraka jiro lava tamin'ny fatana mafana iray dia novonoina rehefa nipoaka, nandefa vera vera tao am-pony. Hitan'ny ray aman-drenin'i Philip Quinn tao anaty tranofiara tao Kent ny fatiny.
Voalaza fa nivezivezy tao amin'ny efitranony i Quinn taorian'ny fipoahan'ny jiro, ary maty izy. Isa 4 - Misy zavatra henonao ve Ny hevitra fa misy zavatra milatsaka avy any an-danitra ka manimba anao dia tsy vaovao; Raha tsy fantatrao fa angidimby milatsaka aminao izany, na izany aza, tsy te hovonoina ianao. Saingy, mpianatra iray tao amin'ilay faritra no novonoina tao British Columbia rehefa nianjera tamin'ny tany ny angidimby iray ary namono azy.
Ilay Mazava Fa ny fanontaniana mila valiana eto dia ny antony tsy nahitany na reny na inona na inona. Ny valiny dia hoe tsy tany amin'ny lala-mahitsy izy, ary manana telefaona avo be koa izy. Maty ihany koa ireo olona nitondra angidimby, ary hafahafa ny zava-nitranga rehetra.
Torohevitra iray ry havana, aza apetaka amin'ny volon-doha feno ny headphone-nao rehefa mandeha. Laharana 3 - Sasao madio Toy ny taloha dia tsy tafiditra ao anaty trano sy antitra intsony ny setroka. Izany dia vokatry ny rafi-pampanafana vaovao, izay tena fampijaliana rehefa niverina tao amin'ny tranony semi-detached i Marko, izay efa nanadio taona, mba hanamboatra mony.
Fitaovana fanadiovana. Avonavona loatra ny fivoaran-tsetroka noho ny kifafa tsotra. fa ampy izany raha afaka mamatotra borosy amin'ny rojo izy ary avy eo mandanja azy amin'ny zavatra iray.
Tsy dia nieritreritra ny drafiny izy. Laharana 2 - Ny fahazoana manao Surfing Big AirKite dia fitsangatsanganana hajain'ny olona izay mitaingina ny rano miaraka amin'ny papango ary indraindray mahazo rivotra be. Tsy maintsy mijery ny onjan-drivotra mahery ianao.
firaketana an-tsokosoko bradley wiggins ora
Laharana 1 - Mijanona ao anaty Fiara Rehefa mandeha amin'ny safari ianao, ny iray amin'ireo fitsipika manan-danja indrindra dia ny tsy fandaozana ny fiara na oviana na oviana raha tsy hoe notoroana hevitra manokana hanao izany; izany ho fiarovana ny olombelona sy ny biby. Saingy ny mpizahatany alemà zokiolona roa amin'ny safari Espaniôla dia nanapa-kevitra ny tsy hihaino ny fampitandremana maro izay nozaraina nanerana ny zaridaina safari ary nivoaka ny fiara ary nankafy ireo biby bebe kokoa. Rehefa nivoaka avy tao anaty fiara izy ireo dia nisy tigra maromaro namoaka azy ireo ary namono azy ireo.
Ohatrinona ny vola ananany Lance Armstrong?
lance armstrong dia norobaina fito ho an'ny amboaram-sakaizany ary eh hita izao fa ny union union bisikileta no niteny nanohitra an'io ary raha ny marina dia manolotra patni quaid uh aho hoy ity manaraka ity, ity no krizy lehibe indrindra, izay efa niatrika ara-dalàna, eh asshole dia nanomboka nidina ankehitriny ary nahatanteraka ny fiampangana ny dokotera hita fa ny sasany tamin'ireo mpiara-miasa aminy taloha dia tena niampanga azy auntie dia ilay fantatrao amin'ny fampidiran-dra be atao sy izay rehetra mandray azy Tsara lavitra ny lohateny lavitra azy fa ny rehetra kosa dia diso tafahoatra ary ny tsirairay dia tsy maintsy miverina amin'ny fomba mahomby eh wikihow tsy maintsy najanona io fihetsika fety io androany ary ankehitriny ao anatiny eh jereo ny vikings, fa raharaha be sahady izao no lasa pensilihazo rehetra miala sasatra eh fa i Lance Armstrong dia olo-malaza goavambe manao fanandevozana ka nanana anaram-boninahitra lus tig izahay rehefa nilaza izy ireo fa ity no krizy lehibe indrindra, bisikileta navily lalana, eny krizy iraisan'ny besinimaro no tratran'ny lalana A krizy marina, b ut amin'ity tranga toy ity dia mankaleo, toy ny mpilalao amin'ny baseball sy fanatanjahan-tena hafa. .. satria na izany aza ary miharihary ary miverina amin'ny laoniny ny fiovana rehetra ka fantatrao aho ary mahandro limbocage izay vita aminy izay vitanao izy ary mitovy ny ilazako azy.
Nahatsapa aho fa toy ny tolotra avy amin'ny tovolahy ao amin'ny ekipan'ny Onroids Rightminnesota miaraka amina basy, fantatr'izy ireo fa tantara lehibe izany satria mino ny rehetra fa hamatsy vola ireo fikambanana mpanao asa soa ireo i Lancarmstrong ary amin'ny alina, saingy matahotra aho fa te-hanompo lehibe na inona na inona fantatrao ary tsy maninona izany satria i Armstrong dia nandalo ny fanomezam-boninahitra tamin'ny bisikileta nivadika nandritra ny telo andro sivifolo ary mpiara-miasa aminy iray manamboninahitra sangany no mbola miady amin'ny homamiadana ary zavatra tsara izany ka manantena aho fa safotra be izany, ary hipetraka izao raha toa izao krizy izao, rehefa vitsy ny olona mahita tsara bisikileta, izany no fahitana ny fandresena ary zaraina amin'ny divizany telo na angamba fanontaniana fohy raha afaka mifanakalo amin'i Lance Armstrong ianao na raha tianao ho lasa tsara ny zanakao lahy ny replikan'ny anao eto dia tsy izaho sy andriamanitra? milaza aminao raha mbola any Saigon ianao eto dia ny làlan'ny fiainana azonao safidiana, tena mety ny ho avy potika lova mety hataonao ve ny miaina any jane, ny vesatry ny porofo ankehitriny fa manana homamiadan'ny testicida koa izy ireo tsy dia mahaliana loatra ny mahita fomba tokony hanomezantsika azy voninahitra lehibe amin'ny maha mpiady azy, fantatrao fa nahasarika ny masonao izany? fa tsy hoe mila homamiadana fotsiny izy fa manao tsara kokoa noho io zavatra mahafinaritra io dia notsapaina nandritra izay taona maro nifandraisany tamin'ny fampidiran-dra, fa ny eritreritra matotra sasany dia mety hiverina amin'ny fampidiran-dra mandritra ny fotoana kelikely, fa fantatrao ve izay tsy ataoko 't ary raha tsy manandrana milomano aho dia hanao zavatra hafa mpisolovava any c_n_n_ chicago ary mieritreritra aho fa izay nolazain'ny mpanadihady momba ny orinasa ary nomen'izy ireo tamin'alahelo dia azoko antoka fa ny sasany amin'ny mpisoloky anao dia avy amin'ny um ny dera lehibe indrindra amin'ny fanatanjahantena dia ireo mpanao heloka bevava tsy fatra-pitia bisikileta amin'ny vatana no tsy mampiasa ny teny na izany aza, ka ny faharatsiako, raha mampiasa izany aho mba hanintonana ahy, nokapohiko ny tenako, saingy tsy cookie io, fa toy izao, saingy mila mitazona ny fomba fijerinao ianao rehefa manoratra satria mahatsapa tena mahatsiravina be izy izao, satria efa be dia be ny fisondrotana ara-bakiteny tamin'ny asany, tokony ho fantatrao, eh fa raha tsy tadidinao ny fifanarahana dia ho tsara kokoa noho ny sivifolo ianao -tsy sivy sivy sivy sivy sivy isanjaton'ny izao tontolo izao tsy manadino ny s Aza hadino ary ny ankamaroan'ny olona dia tsy tokony hametraka sakafo eo ambony latabatra ianao satria manana adin-tsaina ny normana mitady izay fomba hanomezana sakafo ny ankohonanao sy handoavana ny faktioran'ny maro, midika izany fa manahy ny olanao izahay ao amin'ny anshokay anao, ka raha mitondra ny d_o_e_ adala be aho tsy handray izany dia heveriko fa tokony hanaiky izy ireo fa tsara na aiza na aiza.
Tsy azoko antoka fa afaka mandray azy io ny fitsangatsangana, tsy nisoratra anarana, azonao tsara ve ny fotokevitra? Manaja ary mety hitondra olana ara-etika ihany koa ianao, saingy heveriko fa maro ny olona no hanaiky izany, variana amin'ny fanajana izahay, te hiteny izahay fa tsy miraharaha izay lazain'ny olon-kafa izahay hahafahanay miaina miaraka aminao fantatrao izay izany ve? Manambola ireo liana ny vola fa amin'ny faran'ny andro dia aleoko kokoa hajaina ary tsy maintsy ho tia milionera daholo ny olona ka ny vola haha ​​ary hajaina dia ho toy ny multimillionaire ary manaja anao aho raha ny fantatrao. inona ny fanampianao anao dia voasaron'ny vola ianao nahazo iray hafa niady ny valan'aretina fa izaho dia eo amin'ny zavatra hataoko dia tsy mitovy amin'ny lance armstrong sivy ambiny ary fiainana mbola tsara lavitra noho ny ahy amin'ny faran'ny taona da y aleoko aleonao mahalala fiainana mendrika tsy mifanohitra amin'ny tompony lafo vidy, raha ambanin'ny vola iray ianao dia lasa kely kokoa ny safidy www
Ohatrinona ny karaman'ny bisikileta?
Ny salan-karaman'ny mpamily WorldTour isan-taona dia tombanana ho 270.000 euro isan-taona. Na ireo maherifom-pirenena frantsay Thomas Voeckler sy Sylvain Chavanel, izay samy namarana ny asany tamin'ny 2017, dia nahazo vola sahabo ho 750.000 euro6.19. 2019.
Salama. Faran'ny herinandro ny volana martsa ao Ankara. Andro iray na roa dia avy ny orana mifangaro amin'ny savily.
Te hitondra fiara aho rehefa tsara ny andro. Nasehoko an'i Appa ny manodidina. Anjarako izao.
Ny mari-pana dia 19 degre. Na aiza na aiza dia fialantsasatra amin'ny banky noho ny coronavirus. Ny sasany amin'ireo tompon'andraikitra dia manao vakansy.
Misokatra ny antsasaky ny tsena anio. Ny tsenan'i Ayrancı dia matetika apetraka amin'ny asabotsy. Nandritra ny nandehandehako nanodidina ny Appa hisakafo atoandro dia nihinana henan-kena. Ny antsasaky ny eran'ny sotrokely mofo iray dia 10 no izy.
Handeha hiaina any Ahlatlıbel aho. Andao handeha isika. Handeha ho any Konya handeha ho any Konya aho'- Aiza ianao? 'Androany toa ny orinasa japoney no manana ny tsena moto.
Orinasa mivarotra be indrindra: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki
Japoney rehetra. Fa raha ny tena izy ny Japoney hatramin'ny famokarana moto rehefa nanomboka; ohatra ny Honda. Raha nanomboka namokatra moto i Honda dia nahatratra 150 eran-tany.
Nisy orinasa mpanamboatra iray. Ady lehibe II, horohoron-tany sns. Nifanojo tamin'ny fotoana ratsy i Japon.
Taorian'ireny fisehoan-javatra ireny dia nanomboka ny famokarana moto. Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Inona no vitan'ny mpamorona voalohany, sa tsy izany? Moto = Bisikilety Na iza na iza namorona ny moto dia nahavita azy tsara, ny bisikileta no nampiasainy.
Ilay namorona bisikileta no nanao tsaratsara kokoa. Bisikileta voalohany Namboarina tamin'ny 1817. Taorian'izay, Hatramin'ny namoronana ny motera etona tamin'ny 1697, dia efa nanandrana nampifanaraka ny motera etona amin'izay zavatra mihetsika ny olona.
Taorian'ny famoronana ny bisikileta dia mpamorona maro izay nanandrana nametraka izany tamin'ny bisikileta. Hazo bisikileta, ao ambadiky ny motera etona. Ny setroka lehibe an'ny motera setroka dia miakatra amin'ny lohan'ilay mipetraka.
Ilay milina nipoaka dia noforonina. Nitaingina bisikileta izy ary ny bisikileta voalohany dia miendrika bisikileta tanteraka. Dunlop, taorian'ny namoronana ny kodiarana tsy azo naleha, dia nanomboka nivelatra ny kodiaran'ny bisikileta.
Môtô mankany bisikileta efa misy Ny dingana izay manomboka amin'ny fanaingoana dia manohy ny fivoaran'ny bisikileta aorian'ny motera mipoaka. Novokarina tamin'ny varotra voalohany, ary ny môtô izay namokatra betsaka sy namidy dia vita any Alemana. Moto voalohany, avy eo dia mampiasa ny anarana hoe: Motorrad.
Alemanina. Anglisy: Motocy. Anglisy: moto.
Rehefa niditra ny tsena moto ny Japoney tany Eropa sy Amerika dia efa namokatra moto i Peugeot, Norton, Harley Davidson, ary Husqvarna taty aoriana. Ao amin'ny tsenan'ny moto Istanbul Rehefa hitako ny Husqvarna II dia nieritreritra fa marika mahazatra izy io. Hita ho iray amin'ireo mpanamboatra moto taloha indrindra eran'izao tontolo izao izy ary nahavita asa tena avo lenta.
sram mena famerenana
Rehefa nanomboka ny famokarana moto dia nahazo vola be tamin'ny ady izy ireo. Nandritra ny Ady lehibe voalohany sy faharoa dia nanomboka namokatra moto ho an'ny tafika ny orinasa moto. Ny moto mandeha amin'ny setroka voalohany dia natao tamin'ny taona 1868.
Ny moto voalohany amin'ny heviny maoderina dia namboarina tany Alemana tamin'ny anarana hoe Daimler Reitwagen in. Novokarina tamin'ny taona 1885. Ny vatany avy eo vita tamin'ny hazo.
Ary ny ankamaroan'ny mpanamboatra moto dia tsy nanomboka namokatra moto avy hatrany. Ohatra, Yamaha, fantatrao: izy no nanao ny taova sy piano. BMW dia namokatra motera fiaramanidina.
Na ny logo azy dia avy amin'ny propeller. Misy motera an-dranomasina mamokatra. Misy ny olona manamboatra fiara.
Nanomboka nanamboatra fiara i Honda tamin'ny taona 1970 A Lion satria toy ny tsofa ny nifiny. Niova endrika 12 ny LogoIt. Nanamboatra milina kafe, milina fanjairana ary tsofa izy taloha.
Masoandro be no avy eto. Misy visor masoandro;) Araka ny nolazaiko dia namokatra ny moto voalohany i Daimler tamin'ny taona 1885; 1887 nataon'i Dunlop. Izy no namokatra ny kodiarana inflatable.
Ny bisikileta talohan'izay dia kodiarana mafy na hazo na zavatra hafa. Aorian'ny famokarana kodiarana tsy azo afangaro, dia miparitaka ny kodiaran'ny bisikileta, mihamalemy ary mihamitombo ny fampiononana. Daty famokarana moto voalohany tany Alemana tamin'ny 1894.
Peugeot, izay orinasa voalohany namokatra motera1 0,5hp an'ny moto nampianariny voalohany. Peugeot dia niorina tamin'ny 1810 fa tamin'izany fotoana izany, araka ny efa notantarainao, dia mamokatra tsofa na zavatra hafa.
Tamin'ny taona 1901 dia nanomboka namokatra moto izy ireo. Nanaraka izany ny Peugeot avy amin'ny marika hafa. Ary antsoina koa hoe 'Indiana.' Rehefa hitako tamin'ny fampisehoana izany dia tsy noheveriko ho zava-dehibe izany.
Hita fa nanenjika an'i Peugeot koa izy. Izy io no orinasa môtô faharoa nanombohana ny famokarana. Tena malaza any Amerika izy. Orinasa môtô 'Indiana' amerikana voalohany.
Lasa mpinamana ireo mpitaingina bisikileta roa. Fotoana izao ho an'i Harley-Davidson, lehilahy goavambe. 1903.
Mpinamana roa: manomboka ny bizina ao amin'ny trano kely 5 metatra toradroa izay natsangan'olona tao amin'ny zaridain-drainy izy ireo, ary ny ampitso dia nanomboka nanamboatra moto izy ireo. 700 m mahery ny moto vokariny. Aleony ny polisy noho ny hafainganam-pandehan'izy ireo.
Aorian'izany dia mahazo vola be amin'ny tafika amerikana izy ireo mandritra ny ady lehibe amin'ny alàlan'ny fanaovana raharaham-barotra, fivarotana be. Aorian'izany dia lasa iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany izy. Ny zavatra noforonina rehetra eran'izao tontolo izao dia tsy niaraka tamin'ny toerana iray.
Tamin'izany fotoana izany dia nisy ihany koa ny fanatsarana ny famokarana maotera any Angletera. Môtô amin'ny môtô Norton 1908 manomboka famokarana. Ny tena manokana dia mamokatra ampahany izy avy eo ary avy eo mividy ampahany izay apetaka amin'ny chassis mamokatra azy.
Saingy ny famokarana tanteraka miaraka amin'ny moterany manokana dia manomboka amin'ny 1908. 1902Misy marika anglisy. Marika britanika, saingy alemanina roa no anorenan'izy ireo: Triumph. 1959'da Heverina ho iray amin'ireo môtô tsara tarehy indrindra amin'ny fotoana rehetra ary amidy indrindra any UK, Bonneville dia mamokatra maodely 650.
Ary raha fantatsika izany any Torkia, dia fantatrao ilay maodely Java, izay nikatona vetivety dia nosokafana indray. Oh eny, Czechoslovakia, nanjary nandritra ny vanim-potoana. Nanjary orinasa lehibe io.
Nifaninana tamin'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany izy io. Namidy tany amin'ny firenena 120 izy io. BMW dia midika hoe Orinasa Miorina Bavarian.
Ny sary famantarana azy koa dia; tany am-boalohany ho an'ny fanamboarana motera fiaramanidina White propeller propeller, marika manga amin'ny lanitra. Niova be ny sary famantarana nandritra ny taona maro. Avy aiza isika? Andao hojerentsika izay mitranga.
Mandeha ny fandresena. Avy eo ireo orinasa Japoney no misongadina. Honda no mamokatra ny moto voalohany any Japon.
Mekanika bisikileta i Dada. Nampiofanina tamin'ny metallurgy izy. Mamorona piston iray izy ary manandrana mivarotra izany amin'ny Toyota.
Toyota dia tsy hanaiky izany noho ny tsy fanarahana ny fenitra Toyota. Avy eo mamorona tavoahangy hafa izy. Amidiny amin'ny Toyota izany.
Avy eo izy manangana ny orinasany manokana. Miezaha manangana basy poleta. Avy eo nirodana tany amin'ny ozinina ady.
Avy eo dia misy horohoron-tany, mirodana. Avy eo amidiny amin'ny Toyota ny tetikasany farany. Amidiny ny firavaky ny vadiny hanamboarana orinasa.
Tsy zakany izany; mandefa taratasy any amin'ireo bisikileta rehetra ao amin'ny firenena. 'Hanao moto tsara sy tsara ho an'ny firenentsika izahay'. Fivarotana 4500 no mampanantena fanampiana.
Ary manomboka ny famokarana. Avy eo dia omena ny medaly imperaly. Androany dia iray amin'ireo mpivarotra moto manerantany izy io.
Vinavina iza no hiditra amin'ny tontolon'ny motera amin'ny 1949? Japana Voalohany Ny orinasa nanao ny lamasinina. Orinasa manao sambo, fiaramanidina ary lokomotiva izy io. Nanamboatra iray amin'ireo fiarandalamby haingam-pandeha indrindra tany Japon izy: Kawasaki hitanao ny môtô voalohany novokarin'i Kawasaki.
Avy eo dia tonga i Suzuki. Namokatra ny moto voalohany tamin'ny 1952 'niorina sy nalaza be izy. Ny orinasa japoney rehetra dia nandray ny anarana farany an'ny olona izay nanao azy ireo voalohany ary nanangana azy ireo ho marika.
Tamin'ny 1971, Suzuki dia namokatra ny maodely môtô be mpividy indrindra amin'ny fotoana rehetra. Gt750. Io no môtô mpivarotra be indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Mangallar, mangallar. Teraka tany ho any i Appa, tao amin'ny zaridaina notantanan'ny namako, nokaoka ny reniny nandritra ny 3 herinandro dia nanatona ahy izy. Miaraka amiko mandritra ny 10 taona.
Orinasa môtô japoney vaovao indrindra Yamaha. Niorina ho toy ny orinasan-javamaniry sy piano Yamaha izy. Nanomboka namokatra moto i Liebe tamin'ny 1955.
Honda, dia nanomboka taorian'ny Kawasaki sy Suzuki. Fa ny sain'ny lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra dia avy amin'ny Super Racer. Iza ilay modely? YZF R1 Andao tonga any Torkia: any Torkia dia tara ny zavatra rehetra avy amin'ny literatiora ka hatramin'ny teknolojia.
Mampalahelo fa ny môtô koa. Fa manana orinasam-by 2 izahay. Masinina iray 'ara-dalàna
Inona no ataon'i Lance Armstrong anio amin'ny 2020?
Lance Armstrongmbola mipetraka any Aspen, Colorado ary efa nitantana ny podcast 'The Forward' nandritra ny taona maro, izay miresaka matetika amin'ireo vahiny malaza momba ny fiatoana amin'ny tantaram-piainana.
Ohatrinona ny karaman'ny mpamily Tour de France?
Ny mpandresy amin'ny ankapobeny dia mahazo € 20.000, 5.000 € fahaefatra. Mpiady indrindraDriver: Ilay mpandresy amin'ny andro (afa-tsy ny fizahan-toetra sy ny dingana farany) dia hahazo 2000 euro.
Inona no azon'ny mpitaingina bisikileta ao amin'ny Tour de France?
Ireo mpamily mahazatra ny ekipa lehibe dia mahazo hatramin'ny 45000 euro ho karama isan-taona, ankoatry ny kintana. Ampy ho an'ny fiainana izany. Hatreto, ny vehivavy sakaizany dia tsy afaka manonofy afa-tsy amin'ireo vola ireo.
Ahoana no nataon'i Armstrong?
Fomba fanahafana an'i LanceArmstrong
Miaraka amin'ny EPO amin'ny maha doping agents azy, ny vatana dia afaka mitondra oksizena bebe kokoa mankany amin'ny hozatra. Izany dia miteraka haavo avo lenta kokoa, indrindra amin'ny fanatanjahantena fiaretana. EPO vita amin'ny jeneralymananavokatr'izany dia misy vokany mitovy amin'ny fampidiran-dra amin'ny fomba sarotra kokoa.
Ohatrinona ny karaman'ny bisikileta matihanina?
Amin'ny ankapobeny, saika tsy azo atao ny mahazo karama iray tapitrisa euro isan-taona ny ankamaroan'ny bisikileta matihanina nefa tsy afaka mampiseho fandresena lehibe amin'ny klasika toa an'i Paris-Roubaix5. Ny salan-karaman'ny mpamily WorldTour isan-taona dia tombanana ho 270.000 euro isan-taona.19. 2019.
Ohatrinona no karamanao amin'ny bisikileta matihanina?
Kely ny vola azo amin'ny bisikileta, indrindra ho an'ny vehivavy. Ireo mpamily mahazatra ny ekipa lehibe dia mahazo hatramin'ny 45000 euro ho karama isan-taona, ankoatry ny kintana. Ampy ho an'ny fiainana izany.
Ohatrinona ny karaman'ny bisikileta amin'ny hazakazaka matihanina?
fonon-tanana boribory lalana
Oviana i Lance Armstrong no nisotro ronono tamin'ny Tour de France?
Niato fanindroany izy tamin'ny 2011. Lasa lohan'ny fiampangana momba ny dokotera i Armstrong taorian'ny nandreseny ny Tour de France tamin'ny taona 1999. Nandritra ny taona maro dia nandà ny fidirany amin'ny fanaovana dokotera izy.
Oviana i Lance Armstrong no nanomboka ny Livestrong Foundation?
Taorinan'ny fahasitranany dia nanangana ny Lance Armstrong Foundation izy (ny Livestrong Foundation ankehitriny) hanampiana ireo sisa voan'ny homamiadana. Niverina tamin'ny bisikileta tamin'ny 1998, Armstrong dia mpikambana tao amin'ny ekipan'ny US Post / Discovery teo anelanelan'ny 1998 sy 2005 rehefa nahazo ny amboaram-boninahiny Tour de France fito izy, ny be indrindra tamin'ny tantaran'ny hetsika.
Firy taona i Lance Armstrong rehefa nanomboka bisikileta?
Tsiahivin'ny History.com fa ny asan'ny atletisma an'i Armstrong dia nanomboka tamin'ny triathlete iray, ary nanomboka nifaninana matihanina izy tamin'ny faha-16 taonany. Ny bisikileta no natanjaka indrindra tamin'ireo hetsika telo ary nanomboka nanao fiofanana niaraka tamin'ny ekipa fampandrosoana ny bisikileta amerikana izy herintaona taty aoriana.